Muxuu aha ujeedka rasmiga ah ee socdaalka Thabo Mbeki Muqdisho ku yimid (Xog xasaasi ah)
Home Wararka Muxuu aha ujeedka rasmiga ah ee socdaalka Thabo Mbeki Muqdisho ku yimid...
Safarka uu Mudane Thabo Mbeki Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika uu Muqdisho ku yimid ka danbeeyay RW Itoobiya Abiye Axmed oo lagu waday in bishan July 13 ay isku arkaan isaga iyo labada Madaxweyne ee Somalia & Kenya, balse kulankaas uu dhicisoobay kaddib markii ay xogta heleen saxaafadda Kenya iyo midda Soomaalida.
Thabo Mbeki aya wakiil ka ah RW itoobiya oo hadda ah Madaxa urur goboleedka IGAD, waxaana safarka Mudane Thabo Mbeki ku wehliya saraakiil badan oo ka tirsan IGAD oo dhalashadooda tahay Kenyan iyo Itoobiyaan sida ay xogta ku heshay MOL.
Waxaanan shaki ku jirin dalalka Itoobiya, Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD ay culeys ku saarayaan MW Farmaajo in uu ogolaado in wada hadalo lagu dhameeyo arinta la xiriita muranka ay gelisay Kenya Badda Soomaaliyeed lana joojiyo dacwada taala Maxkamada Caalamiga ee dunida.
Hadaba culeyska caalamka waxaa dhinac socda midkaloo warbaahineed oo gudaha iyo dibadaba laga wado, hadii aad warka imaanshaha wafdigaan soo gaaray Muqdisho iyo ujeedadooda aad ka weyso laanta dhegeysiga ee BBC-da waxaad kaga samri kartaa iney taasi u gacan gashay markii loo soo raray Nairobi Dowlada Kenya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia oo ka hadlay ujeedada wafdiga iyo mudada ay joogayaan dalka Isaga oo aan marna soo hadal qaadin ujeedka rasmiga ah ee wafdigan uu ku yimid Muqdisho, halka Wasiirka Arrimaha Dibadda oo wafdigan ay isku arkeen magaalada Nairobi ay boggeeda twitterka ku sheegtay in ay wadahadalo miro dhal ah la yeelatay Mudane Thabo Mbeki & wafdigiisa arrimaha laga wada hadlayna ay la xiriireen sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka Geeska Afrika iyo caqabadaha ka taagan badweynta hindiya iyo badda cas.
Waxaa wafdiga Thabo Mbeki ku wehliya wakiilka IGAD ee dhawaantan loo magacaabay ka howgalka arrimaha Badweynta Hindiya iyo Badda Cas oo dhalashadiisuna tahay Kenya.
Thabo Mbeki & Uhuru Kenyatta oo kulan kali ah ku yeeshay Madaxtooyada Kenya Jimco July 19, 2019
Mudane Thabo Mbeki aya maalin ka hor waxa ay isa soo arkeen Madaxweynaha Kenya Mr. Uhuru Kenyatta, waxaana qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Kenya lagu sheegay in labada masuul ay ka wadahadleen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo xurguf siyaasadeed soo kala dhex gashay.
Thabo Mbeki & Farmaajo oo kulan keli ah ku yeeshay Madaxtooyada Villa Somalia Sabti July 20, 2019
MW Farmajo aya la qaatay kulan aan cidina ku wehlin isaga iyo Madaxweynihii hore ee Koofur Afrika Mr. Thabo Mbeki, waxaana MOL ay xog ku heshay in Farmaajo loo gudbiyay farriin uu uga siday RW Itoobiya isla markaana looga fadhiyo in uu ogolaado sidii kiiska Badda looga soo celin lahaa Maxkamadda lana siiyo fursad labada dal in ay wada hadal galaan muddo sanad ah, wadahadalkaas oo ay garwadeen ka noqoneyso urur Goboleedka IGAD.
MW Farmajo haddii uu ogolaado in kiiska Badda dib loo dhigo muddo sanad ah, waxaa hubaal ah in dibad baxyo rabshado wato ay ka dhici doonaan Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan, taasoo soo dedejin doonta in uu kursigiisa ku waayo laguna maxkamadeeyo mustaqbalka.
Shacabka Soomaaliyeed aya ka dhaga maran halka uu marayo xaalka kiiska Badda iyadoo Villa Somalia ay Warbaahinta Muqdisho qaar ka mid ah aysan sooba hadal qaadi karin imaanshaha wafdigan iyo ujeedadoodaba, halka kuwa ka hadlay ee soo hadalqaadayna aysan wax taxliil ah oo la fahmi karo raacin warkooda, taasoo muujineysa ineysan si joogta ah ula socon arinkaan gaaray heer maxkamadeed iyo in uu xumaado xiriirka labada dal.
Waa muhiim in saxaafadda gudaha iyo dibaddaba & dadka Soomaaliyeedba ay aad ugu baraarug sanaadaan waxyaabaha ka socda hareerahooda iyo Inaan marna gorgortan laga galin taako ka mid ah badda & dhulka Soomaaliya.
Waxaanan shaki ku jirin in Warbaahintii Soomaalidu ay qaarna Kenya u gacan gashay halka kuwa Muqdisho ka howlgalana ay qaarkood dowladu ka aamusisay arinkaan iyo ka hadalkeeda sida la tuhmi karo, halka kuwa kalena aysan dareen gaar ah ku heyn duulaanka qaawan ee Kenya iyo hadba doc isku qaadkeeda.
Previous articleBeesha Ceyr oo ka qaybgalayso shirka Hobyo & Kheyre oo balantii loga baxay
Next articleThabo Mbeki visits Mogadishu to defuse tension between Somalia & Kenya